५ फाल्गुन, २०७६ – Mero UK
Day: ५ फाल्गुन, २०७६
डिल्लीबजार कारागारमा महराको १०३ दिन
५ फाल्गुन, २०७६ ५ फाल्गुन, २०७६ / अनलाइन खबर
५ फागुन, काठमाडौं । जबरजस्ती करणीको प्रयास गरेको अभियोगमा १८ कात्तिकमै जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाउनेमा निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा ढुक्क देखिन्थे । आफूले प्रहरी र अदालतमा दिएको बयानलाई पुष्टि गर्दै पीडित भनिएकी महिलाले आफूमाथि कुनै किसिमको दुर्व्यवहार नभएको बकपत्र गरेकाले छुट्ने उनको आशा थियो । तर, महराले सोचे जस्तो भएन । बयान, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
स्पेनिस फुटबल फेडेरेसनको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने कासियासको घोषणा
काठमाडौं । इकर कासियासले रोयल स्पेनिस फुटबल फेडेरेसन -आरएर्फइएफ)को अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । स्पेन तथा रियल मडि्रड पूर्व गोलकिपर कासियासलाई सन् २०१९ मा पोर्टोमा ट्रेनिङका क्रममा हृदयघात भएको थियो । त्यसयता उनले खेलेका छैनन् । अब फुटबल संघको नेतृत्वमा आउने प्रयास थालेका छन् । ‘जब आरएर्फइएफको चुनाव हुन्छ, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
सुन तस्करी प्रकरणमा गोरेकी श्रीमतीसहित चारजना धरौटीमा छुटे
५ फागुन, विराटनगर । करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका चारजना हाजिर भएलगत्तै धरौटीमा छुटेका छन् । चुणामणि उप्रेती गोरेकी श्रीमती, नर्वदा, बाजेको सेकुवा कर्नरका सञ्चालक चेतनाथ भण्डारीसहित चारजना धरौटी बुझाएर छुटेका हुन् । मोरङ उर्लाबारीका समन शाक्य हत्या अनुसन्धानका क्रममा खुलेको करिब ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा २०७५ बैशाख १९ गते ६३ …
सुन तस्करी प्रकरणमा गोरेकी श्रीमतीसहित चारजना धरौटीमा छुटे Read More »
काठमाडौंमा गरिँदैछ विजुलीको तार भूमिगत (भिडियोसहित)
५ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौंका अधिकांश विद्युतका पोलमा थाम्नै नसक्ने तारको गुजुल्टो र दूरसञ्चार उपकरणहरु छन् । यसले शहरलाई कुरुप मात्रै बनाएको छैन, संघीय राजधानी नै विद्युतीय धरापमा परेको छ । त्यस्तो अवस्था हटाउन भन्दै सोमबारदेखि सरकारले तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिरकरणले एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा काठमाडौंमा …
काठमाडौंमा गरिँदैछ विजुलीको तार भूमिगत (भिडियोसहित) Read More »
खरिपाटी क्वारेन्टाइनबाट प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद
हुवे प्रान्तभरिबाट वुहानका वुवादामा जम्मा भएका १८१ जना भेला भएपछि इमिग्रेसनसम्मको ५ वटा स्वास्थ परीक्षण पार गरेर १ सय ७५ जना नेपालबाट आएको विमान चढ्न वेटिङ रुमसम्म पुग्दा थकित देखिन्थे । तर, यो थकाइका दृष्य तुरुन्तै हर्षमा परिणत भयो । कारण थियो, नेपाल वायुसेवाको विमान टर्मिनलमा हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको दृष्य । आफनो देशको ध्वजावाहक विमानले …
खरिपाटी क्वारेन्टाइनबाट प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद Read More »
मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मस्त, ‘हेल्लो सीएम’ सुनिएन !
५ फागुन, धनगढी । डोटी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रदेशसभा सदस्यको रुपमा विजयी त्रिलोचन भट्ट २०७४ फाल्गुन ३ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनको मन्त्रिपरिषदमा तीनजना तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट र चारजना तत्कालीन नेकपा (एमाले) बाट मन्त्री बने । मुख्यमन्त्री भट्टसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा र भूमि, » पुरा …
मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मस्त, ‘हेल्लो सीएम’ सुनिएन ! Read More »